कुपोषणविरूद्ध सजगता आवश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कुपोषणविरूद्ध सजगता आवश्यक
आश्विन १८, २०७४ डा. अरुणा उप्रेती
काठमाडौँ — केही दिनअधि काठमाडौंको एक स्कुलमा मलाई बालबालिकाको पोषणबारे छलफल गर्न बोलाइयो । मैले अभिभावकले छोराछोरीलाई चाउचाउ र कुरमुरे खाजामा दिएर पठाउने हुनाले यस्तो खराब बानी छाड्न आग्रह गरें ।
त्यही सिलसिलामा एक महिलाले सोधिन्, ‘मेरो ४ वर्षको छोरालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदा बालभिटाको प्याकेट पनि खानदिए। बालभिटा खुवाएपछि बच्चाको दिमाग तेज हुन्छ, बच्चा हलक्क बढ्छ भनेका थिए। तर मेरो बच्चाले खान मानेन, अनि मैले त खुवाउनै छाडिदिएँ। बालभिटा खुवाउनैपर्ने हो? के त्यसले बच्चाको दिमाग बढाउँछ?’ म छक्क परें।
पेटभरि दाल, भात, तरकारी, मोही, लिटो, कोदो, फापर आदि खाद्य तत्त्वले बरु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो पार्छ। तर यस्ता खाद्यवस्तुको बारेमा समुदायलाई ज्ञान दिँदा कम्पनीको व्यापार नबढ्ने भएकाले यस्तो वस्तुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वास्तै गर्दैन। अहिलेसम्म मैले २/३ जनामन्त्री, ३ जना सचिव योजना आयोगका सदस्य र मुख्य सचिवसमेतलाई यस्तो प्याकेटको काम नलाग्ने बालभिटामा अन्धाधुन्द पैसा लगानी गर्नु गलत हो भनेर जानकारी दिएकी थिएँ। यो कुरा मैले विभिन्न पोषणविद् र बालरोग विशेषज्ञसँग छलफल गरेर भनेकी थिएँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, ‘कुपोषण हुन नदिन पोषणयुक्त भोजन दिनुपर्छ। कुपोषण भइसकेपछि औषधिले होइन पोषणयुक्त भोजनले नै त्यसलाई निको पार्नुपर्छ।’
त्यसैले म जहाँ गए पनि महिला स्वयम्सेविका र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भन्ने गर्छु, ‘यस्तो काम नलाग्ने बालभिटा र प्याकेटमा आएको प्लम्पिनटजस्ता वस्तु तपाईं आफ्ना बच्चालाई दिनुहुन्न भने समुदायका बालबालिकालाई किन दिनुहुन्छ?’ उहाँहरूको भनाइ हुन्छ, ‘के गर्ने हामीलाई त्यस्तै तालिम दिइएको छ। हामीलाई पनि थाहा छ कि यस्तो बालभिटा र प्लम्पिनट काम लाग्दैनन्। तर जबरजस्ती हामी अभिभावकलाई भिडाएर पठाउँछौं। हामीले त कतिचोटि हाकिमलाई पनि भनिसकेका छौ कि बालभिटा आमाहरूले खुवाउँदैनन्। हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनन्।’ बालभिटा र प्लम्पिनटजस्ता काम नलाग्ने वस्तु बाँडिएका छन् र फालिएका छन्। कृषि मन्त्रालयले पोषणका किताब पनि मन्त्रालयमै थन्क्याएको छ। त्यहाँबाट निकालिएका लट्टे, कोदो, फापर, तरुलबारे लेखिएका पुस्तिकाले स्वास्थ्यकर्मीको ज्ञान बढाउन सकेका छैनन्। अर्थात घरको पोषणलाई हेपेर कुपोषित बच्चालाई प्याकेटका खाना दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गर्छ।
२ वर्षअघि मलाई योजना आयोगले स्वास्थ्यको एउटा समितिमा राखेको थियो तर जब मैलै योजना आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका गलत नीतिबारे २/३ पटक बोलें, मलाई समितिबाटै हटाइयो। मेरो कुपोषणविरुद्ध घरको खाना प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार योजना आयोगका सदस्यलाई पचेन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ कि बालभिटाको प्रयोग असफल भइसकेको छ, प्लम्पिनट धेरै ठाउँमा कुहिएर बसेको छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषण तत्त्व पाइने खानेकुरा छन्। तर तिनको बारेमा कृषि मन्त्रालयले निकालेको पुस्तिकाहरूको ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग हुँदैन।
अति कुपोषित बालबालिकालाई कसरी घरको खाना दिएर स्वस्थ पार्न सकिन्छ भनी सरकारी अस्पतालमा पोषण पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। ती केन्द्रमा अति कुपोषित बच्चालाई ठीक पारेका तथ्यहरू सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएका छन्। बच्चालाई स्वस्थ बनाउन त घरकै दाल, भात, तरकारी, आलु, दूध, रोटी, चिउरा, चना दिनुपर्ने हुन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले स्थापित गरेका पुन:स्थापना केन्द्रको कामलाई बेवास्ता गरेर यस्तो प्याकेट बाँड्ने विचार गर्छ। हाम्रा रैथाने भोजनलाई वास्ता नगर्ने हो र बाहिरबाट ल्याइएको भोजन दिने सोचले हाम्रा बालबच्चामा कुपोषण बढ्दै छ। बदाम, तिल, आलस, भटमास, केराउ, चनाको टुसा उमारेर त्यसको पिठो बनाएर सर्वोत्तम पिठो दिने हो भने हाम्रा केटाकेटी स्वस्थ हुनेछन्। दाल, भात, केरा, रोटी, हलुवा, फर्सीको तरकारीको स्वाद तिनले मन पराउनेछन्।